Inkcazo ebukhoma yefowuni esongekayo yeSamsung | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Uyilandela njani inkcazo yefowuni yokusonga ye-Samsung
Ifowuni yokusonga yakwaSamsung yenye yezona zinto zithethwa kakhulu ngeemodeli zale nyanga. Umzi-mveliso ubonakala ujolise kwezi ntlobo zeefowuni, kuba ayingobaseKorea bodwa abacwangcisa ukwaziswa okufanayo. Ezinye iimveliso zithanda Huawei o LG Sele beqinisekisile ukuba basebenza kwifowuni esongekayo. Nangona amaKorea ekhokela.
Kule veki inye umhla apho le fowuni yayizakuvezwa khona, njengoko besesikuxelele, Iya kuba namhlanje nge-7 kaNovemba. Isamsung iququzelela iNkomfa yonjiniyela eSan Francisco, apho le fowuni iza kusindiswa khona ngokusemthethweni. Kwaye sele siyayazi indlela yokulandela lo msitho.
Njengoko bekulindelekile, ukusasazwa ngqo kwesi siganeko yinkampani yaseKorea kuya kusasazwa. Siza kuba nakho ukuyilandela ngokuthe ngqo kwiYouTube, kwikhonkco esele iqabane laseKorea labelane ngalo nabasebenzisi, esikushiya apha ngezantsi. Ngale ndlela unokubona ukuboniswa kwesi sixhobo seSamsung.
Le fowuni ivelise uninzi lwamarhe kunye neendaba, nangona ukuza kuthi ga ngoku asinazo kwaphela iinkcukacha malunga nawo. Kukho amarhe malunga nokubalulwa kwayo. Okwangoku asikabi nayo imifanekiso esemthethweni yesi sixhobo. Malunga negama layo, kucingelwa ukuba iya kuba yi-Infinity Flex okanye iFlex ngokulula.
Ngale njikalanga ngo-19: 00, ixesha leSpanish, le nkomfa ye-Samsung izakuqala. Kuya kuba ngeli xesha apho siya kuba nakho ukulandela ukuboniswa kwesi sixhobo. Into esingayaziyo kukulandelelana kwesi siganeko, ngenxa yoko ifowuni ayisiyiyo into yokuqala ukuza.
Ngaphandle kwamathandabuzo, umzuzu ophambili wohlobo lweKorea. Emva kweenyanga ezininzi, Umhla uyeza xa le fowuni isongelwe ivela kwi-Samsung iya kuba semthethweni ngeeyure nje ezimbalwa. Siza kuba silandela umcimbi ngqo, ke hlala ubukele kamva nazo zonke iindaba ezivela kwifowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Uyilandela njani inkcazo yefowuni yokusonga ye-Samsung
Ungayifaka njani imifanekiso kwiifomathi ezijikelezayo kwi-Android